Khasaare Laydhka TCDD Marka loo eego Warbixinta Maxakamadda xisaabaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKhasaaraha TCDD Marka loo eego Warbixinta TCA
31 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Sida lagu sheegay warbixinta tcdd waxyeelladu waxay dhaawacaysaa sayidkii
TCA waxay aqoonsatay cilad-darro baahsan oo ka jirta xisaabaadka TCDD, oo ay soo qaadeen shilal sannadihii la soo dhaafay. Marka loo eego sicirka sarrifka ee sagaal sano ka hor, hay'addu waxay lumisay 72 milyan oo TL.
Hantidhawrka Maxkamadda Hanti-Dhowrka Turkiga, oo baaray TCDD, wuxuu sameeyay go'aanno badan oo muhiim ah oo ka yimid khasaaraha ay sababaan khaladaadka koontada ilaa maqnaanshaha nidaamka tilmaanta ee sababay shilalka dhimashada.
BİRGÜN ahMarka loo eego warbixintii Burcu Cansu, ”warbixinta xisaabinta TCDD ee xisaabinta maxkamada ee 2018, YHT iyo khadadka tareenka xawaaraha sare ee qadka tareenka halkaas oo shaqadii qeybaha ka maqnaa ee shaqada la dhammeeyay. Sida lagu sheegay warbixinta, dhammaadka 2018, ”Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-İstanbul ee Ankara-calaamadaha waa eber qaybaha Ankara-Sincan, Pamukova-Sapanca iyo Dil-Quay-Gebze, khadka tareenka ee Konya-Karaman, marka loo eego Heerka Khadka Tareenka ee Yurub. Warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday inuu jiro qasaaro nafeed oo shilalka ah oo leh xariijin calaamad eber ah, waxyeelo soo gaartay qiyaastii 100 milyan oo TL ah iyo labo tareen oo xawaare sare ah oo aan la isticmaali karin.
Waxaa lagu nuuxnuuxsaday in kontaroolka gudaha, oo ay tahay in la sameeyo ugu yaraan hal mar sanadkii, aan la qaban isla markaana aan la magacaabin xisaabiyaha gudaha.
LAGU QAADO DHISMAHA
Warbixinta ayaa lagu sheegay in caasimada TCDD loo kordhiyay TL 2017 bilyan sanadkii 5 isla markaana aan wax korodh ah la kordhinin sanadka 2018. Khasaaraha TL 2.5 bilyan khasaaraha ayaa loo diiwaangeliyay natiijada shirkada. Warbixinta, go'aamada soosocda ayaa la sameeyay kuwaas oo tilmaamaya in hay'addu waxyeelo soo gaartay:
Waxaa laga xisaabiyay sicirka sarrifka sagaal sano ka hor: Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD) wuxuu ku qiimeeyay heerka sarrifka ee 31.12.2018 halkii laga isticmaali lahaa sicirka sarrifka oo loo adeegsan doono aasaas ahaan qiimeynta taariikhdu tahay 28.04.2009 illaa NTMK-EAST METALS SA Wadaag Venture maadaama ay noqonayso shaki shisheeye shaki ku jiro. Natiijadii qiimaynta 72 milyan 458 kun 585 heerka sarrifka TL ayaa dhacday.
Bixinta dambe ayaa la sameeyay: 4 milyan 93 kun 542 TL bayaanka dakhliga ee TCDD Taşımacılık AŞ kharashaadka maaliyadeed si qaldan ayaa loo duubay. Lacagtan waxay ka koobneyd waxyaabo ay ka mid yihiin dulsaarka canshuurta, canshuurta dib u dhaca canshuurta, taraafiga SSI.
Wax khasaare ah lama soo qaadin: TCDD Tasimacilik AS waxaa aasaasay TCDD Tasimacilik AS oo loogu talagalay dayactirka burburka baabuurkii ugu horreeyay ee tareenka ka dib markii ay isku dhaceen xamuulka xamuulka 80001 oo leh xamuul xamuul oo loo adeegsaday baaxadda waxsoosaarka ee mashruuca dib-u-dhiska Sincan-Ankara-Kayas khadka 03.11.2017. milyan 1 kun oo yuuro ah ayaa la siiyay qiimaha dayactirka. Burburkii ka dhashay howlihii hawlihii YHT muddadii dayactirka laguma arkin khasaarooyinka quseeya howlgalka.
KHUDBADAHA BULSHADA EE LA BILAABAY
Sannadkii 2018, 135 milyan oo TL ayaa lagu kharash gareeyay baaxadda soo iibsiga adeegga. 22.9 milyan ayaa loogu talagalay nadiifinta, 13.8 milyan oo loogu talagalay ilaalinta iyo amniga, 4.2 milyan oo loogu talagalay gaadiidka iyo kirada baabuurta, 28 milyan oo cunto ah iyo 66.3 milyan oo adeegyo kale ah. Kharashaadka shirkadda ee 2018 waxay ahayd 2.8 bilyan oo TL inkasta oo saadaalinta TL 3 bilyan.
Lama soo saarin borotokool la xiriira dhismaha, casriyeynta, dayactirka iyo dib u eegista shaqooyinka gawaarida, gaariga rakaabka, gawaarida xamuulka oo la amro iyo in lagu amro TCDD Taşımacılık AŞ, Tüdemsaş, Tülomsaş iyo Tüvasaş. Bixinta waxaa lagu sameeyay qiimaha ay go'aamisay Agaasinka Guud ee TCDD.
Wajiyaddii Yaryar ee Da 'yarta ah ayaa u soo jiiday Goobta
Garoonka Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul ayaa jabiyay Record
Professor hawlgabay wuxuu soo jeedinayaa Nidaamka Gawaariga ee Sariçay
Diiwaan jabinta Diiwaangelinta Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Kaarka Safarka oo bilaash ah iyo Lacag dhimis loogu talagalay Dadka Waaweyn ee Magaalada Bursa
Heerka Kontoroolka Tareenka Yurub
shaqada calaamadaynta ee khadadka tareenka
Saldhiga Tareenka ee Konya
Caddaynta dakhliga ee TCDD Taşımacılık AŞ
Soodejinta Tareenka Sare
SAMULAŞ Waxay qaadatay in ka badan 30 Milyan oo Rakaab ah